musha nyika dzakabatana Hollywood nyeredzi Tom Cruise Yevacheche Nyaya Yenyaya Uye Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nhoroondo Yakakwana yeAmerican Actor ane zita rezita “TC". Yedu Tom Cruise yeUdiki Nyaya uye Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yezvinoitika zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Ehe, munhu wese anoziva kuti ndiye mumwe wevanyori venyanzvi dzemamuvhi muUnited States. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Tom Cruise's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Tom Cruise Upenyu hwepakutanga uye Imhuri Yemashure:
Akakurumbira mutambi Tom Cruise (christened Thomas Cruise Mapother IV) akaberekwa musi we3rd waChikunguru 1962 kuguta reSyacacuse muNew York, USA Iye ari wechipiri pavana vana akaberekwa mumubatanidzwa pakati paamai vake, Mary Lee nababa vake, Thomas Cruise Mapother III.
Iyo inozivikanwa firimu mugadziri ndeyeAmerican nyika yeChirungu uye yeIrish mhuri midzi. Kuwedzerwa kumhuri yekwaCruise imidzi yake yeGerman neyeWales zvinomusimbisa semunhu wedzinza rakasanganiswa. Wechidiki Cruise akarererwa munzvimbo dzakasiyana muUnited States neCanada sezvo baba vake vainetseka kuita raramo yemhuri inosanganisira amai vaCruise, hanzvadzi yake mukuru Lee Ann DeVette pamwe nehanzvadzi diki - Marian Henry naCass Mapother.
Nekuda kweizvozvo, Cruise aive nehudiki hunonetsa hwakamamuona achikura muhurombo. Pakazosvika nguva Cruise akange ave zera 8, aive atotakura zvakakwana zvehurombo uye akatanga kushanda akabhadhara mabasa anosanganisira kucheka huswa, kushamba mashizha, kuburitsa mapepanhau pamwe nekutengesa makadhi emhemberero dzeIsita neyeKisimusi.
Tom Cruise Dzidzo uye Basa Rekuvaka:
Kwete yekutenda kuCruise's 'States / Canada kutsika' hupenyu hwepakutanga, akadzidziswa muzvikoro zvisingasviki gumi nemashanu mumakore gumi nemana! Yakakurumbira pakati pezvikoro yaive Robert Hopkins Veruzhinji Chikoro muOntario, Canada uko yechina-15th giredhi Cruise yaitora kufarira mumutambo uye yaibatanidzwa mumitambo.
Kudzidziswa kwakazotevera kwakazoona Cruise achienda kuHenry Munro Middle School kuOttawa kwekirasi yake yegumi nenhanhatu asati awana mudzidzi wechechi kuti adzidze pane imwe seminari yekuFrance yeCincinnati, Ohio.
Yakanga iri seminarian yaFrancisan iyo Cruise akashuvira kuve mupristi wechikatorike uye akatamba nhabvu semutambo wechikoro asati arega kuita kwekunamata kwechitendero panguva yaanenge ave kuda kusvika makore gumi nemaviri. Cruise akazopedzisira apedza mabasa ekudzidzira paGlen Ridge High School kuNew Jersey kwaakapindawo mumitambo yechikoro kudzamara apedza kudzidza mu1980.
Tom Cruise Yekutanga Yekuita Hupenyu:
Paakapedza chikoro chesekondari, Cruise akasvika kuNew York City aine chinangwa chekuti atsvage basa rekuita. Nekudaro, akatanga achitanga kuchengeta muviri nemweya pamwe chete nematafura ebhazi paneresitorendi.
Cruise paakange aripo, akashandisa nguva yake yemahara pakuongorora mabasa ekuita uye akakurumidza kuita rombo rakanaka rekuwana chikamu chidiki mufirimu ra1981 - "Endless Love" yakatumidzwa zita raScott Spencer ra1979.
Tom Cruise Mugwagwa Wokurumbira Nhau:
Kuonekwa kwaCruise mu "Rudo Rusingaperi" kwakateverwa nekubhuka kwake kwemafirimu madiki madiki kudzamara azotarisa chikamu chemutambi anovimbisa mushure mekuonekwa mufirimu ra1983 rakanzi "Risky Bhizinesi".
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti "Risky Bhizinesi" yaionekwa senge shanduko yebasa kuCruise iyo mashandiro ayo akayerwa neRotten Tomato se "pasina mubvunzo mumwe wepamoyo wake wepakutanga."
Tom Cruise Kukwira Kumukurumbira Nyaya:
Achibatanidza kubudirira kwake kwekutanga, iye ane makore makumi maviri nematatu-makore airidza chinzvimbo cheUnited States Naval Aviator LT Pete "Maverick" Mitchell mufirimu ya23 "Top Gun" iyo yakasimudzira chinzvimbo chake kune icho chemutambi.
Kukurumidza kuenda kunguva yekunyora Cruise vese vari mugadziri wemamuvhi uye mugadziri wemufirimu uyo ​​anoonekwa seimwe yepamusoro-grossing bhokisi hofisi nyeredzi yenguva dzese. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Tom Cruise Ukama Hupenyu:
Ehe, Tom Cruise ave achitambudzwa nebasa rakabatikana kubvira paakasimukira mukurumbira. Asi Zvisinei nekuti Cruise angave akabatikana sei, anogara achiwana nguva yekurera hupenyu hwake hwerudo sezvinoonekwa muhukama hwake hweruzivo mumakore. Tinokuunzira chokwadi nezvenhoroondo yake yekufambidzana, michato uye ikozvino hukama hwehukama.
Kutanga, mutambi uyu anga achibatanidzwa murudo pasina vashoma pane vasikana ve13. Akakurumbira pakati pevakadzi ava musikana wake wekutanga musikana Diane Cox, mutambi wekuAmerica, Rebecca De Mornay, muimbi weAmerica Cher, Vocalist Patti Scialfa uye mutambi weSpain, Penélope Cruz.
Muchato wake wekutanga waive nemusikana wemuAmerican Mimi rogers, yavo yaive mubatanidzwa wakangogara makore mashoma vasati vaenda kwakasiyana muna 1990. Cruise akasangana nemukadzi wake anotevera mutambi Nicole Kidman vachitora mafirimu Mazuva eThunder (1990). Vakaenderera kutora vana vaviri; mwanasikana - Isabella Jane (akazvarwa muna 1992) uye mwanakomana - Connor Antony (akazvarwa muna 1995) asati arambana muna 2001.
Wekupedzisira haana kunzwikwa nezvekuroora kwaCruise uye kurambana kusvika 2012 paakasiyana nemukadzi wake wechitatu. Ivo ipapo-vaviri vakasunga banga mu2006 vaive nemwanasikana pamwechete Suri (akazvarwa 2006) kubva kune avo mashanu nehafu makore emuchato. Hazvina zvakawanda zvinozivikanwa nezve chinzvimbo chehukama hwaTom Cruise panguva yekunyora sezvo ari ega pachivande nezvehukama hwepabonde zvichitevera kurambana kwake kwekupedzisira.
Tom Cruise Mhuri Hupenyu Hwechokwadi:
Mhuri ndechimwe chezvisikwa zvakagadzirwa uye izvo zvaTom Cruise hazviite musiyano. Tinokuunzira chokwadi pamusoro penhengo dzemhuri yaCruise kutanga nevabereki vake uye zvinyorwa zviripo nezvekwake.
Nezve baba vaTom Cruise:
Thomas Mapother III aive baba vekwaCruise. Iye akazvarwa pa15th yaGumiguru 1934 uye akashanda sainjiniya wemagetsi panguva yehupenyu hwaCruise hwepakutanga. Iye anozivikanwa zvakare kuti akashanda semubatsiri wezvekudzivirirwa neCanada Armed Forces vasati vaparadzaniswa naamai vaCruise apo mutambi wacho aive mudzidzi wegiredhi rechitanhatu paHenry Munro Middle School muOttawa.
Kusvika parufu rwake muna Ndira 1984, Thomas Mapother III anga asina hukama hwepedyo nevana vake kunyanya Cruise akataura zvakaipa nezvake. Rudo rwakanga rusina Cruise kuna baba vake vekubereka rwakagadzirirwa nhanho-baba vake John 'Jack' McLeod South uyo mutambi anorondedzera seakachenjera uye akachenjera ma. Jack akaroora amai vaCruise muna 1978 uye akaramba akabatana naye kusvikira afa muna 2015.
Nezve amai vaTom Cruise:
Mary Lee aive amai vaCruise vane rudo uye vanotsigira. Iye akazvarwa pa22nd yaSeptember 1926 uye akashanda semudzidzisi akasarudzika edzidzo. Sezvineiwo munhu wepedyo kumoyo waCruise, Mary akashanda mazhinji Mabasa kutsigira vana vake vana mushure mekurambana, kusanganisira kutengesa zvigadzirwa zvemagetsi. Kunyangwe Cruise paakawana budiriro mukuita rutsigiro rwaMaria kwaari haina kumira. Aiwanzoonekwa pama premieres emamuvhi ake kusvika parufu rwake mu2017.
Nezve hama yaTom Cruise:
Cruise haina hama (s) asi vatatu vakafanana hanzvadzi dzaakakurira nadzo. Ivo vanosanganisira mukoma wake mukuru Lee Ann DeVette pamwe nehanzvadzi diki Marian Henry naCass Mapother. Mukoma wedangwe Lee Ann akamboshanda saCruise mushambadzi uye ave achibatanidzwa mukambani yake yekugadzira. Padivi pake, Marian mutengesi wezvivakwa nepo Cruise wechitatu uye mudiki hanzvadzi - Cass Mapother muridzi weresitorendi inonzi Cass 'Cafe muNew Jersey.
Nezve hama dzaTom Cruise:
Kuenderera mberi kuhama dzaTom Cruise kana hupenyu hwakawedzerwa hwemhuri, hazvisi zvakawanda zvinozivikanwa nezve kumashure kwemhuri yababa nasekuru vake vanozivikanwa saThomas Cruise Mapother II naMary Cruise. Saizvozvowo, zvinyorwa zvine chekuita nemhuri yemadzisekuru ake amai - Catherine Louise Reibert naambuya - Comala Rosella Ramser anoramba asingazivikanwe. Muzukuru wemutambi uyu ndiWilliam Mapother nepo mumwe wevanun'una vake achinzi anonzi Cal (akaberekerwa hanzvadzi yemari Marian. Padivi reripi, vanasekuru vaCruise nasekuru vake nanasekuru vanoramba vasingazivikanwe panguva yekunyora.
VERENGA Randy Orton Mwana weChiitiko Plus Untold Biography Facts
Tom Cruise Yemunhu Hupenyu Chokwadi:
Kune vanhu vashoma chete vanoziva nezve hunhu hwaTom Cruise kupfuura kwake kwekuedza uye kubvunzurudza. Gara kumashure apo isu tichifukunura chokwadi pamusoro peCruise's persona iyo inotsanangurwa zvakanyanya neCancer zodiac maitiro.
Iye anogadzira, akasimba, ane hushamwari, ane hungwaru hwepfungwa uye zvine mwero anoburitsa pachena nezve hupenyu hwake hwega uye hwepamoyo. Zvido zveCruise uye zvekuzvivaraidza zvinosanganisira skydiving, scuba diving, kubhururuka ndege uye kushandisa nguva yakanaka neshamwari uye nemhuri.
Tom Cruise Mararamiro:
Unoziva here kuti mari inofungidzirwa inokwana madhora zviuru mazana mashanu nemakumi manomwe emadhora - panguva yekunyora iyi bio - pamwe neanoda kusvika makumi emakore ruzivo rwehunyanzvi hwekuita uye kutungamira pamwe nezvimwe zviedza zvekumisikidza Tom Cruise muchikwata chevane mari yepamusoro vachiwana vatambi.
Nemubairo unoshamisa unouya, Cruise anogara hupenyu hwoumbozha hunoonekwa mune rake dzimba dzoumbozha. Akagara muBeverly Hills, Telluride, Los Angeles, Coladoado uye ane nzvimbo yeplush penthouse kuWellwater muFlorida.
Kana Cruise isiri kubhuya nzvimbo yepamberi yekutengesa anogutsa chinodiwa chake chekumhanya nekunakidzwa nekutasva mumotokari dzemhando yepamusoro dzinosanganisira Bugatti Veyron, Ford Mustang Saleen S281, Chevrolet Corvette, Porsche 911 uye BMW 7 dzakateerana.
Tom Cruise Untold Chokwadi:
Kuputira yedu Tom Cruise yehucheche nyaya uye biography pano pane zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi nezvake.
Tom Cruise akarerwa muchiKaturike uye akatoshuvira kuve mupirisita achiri mudiki. Nekudaro, akaunzwa kuChechi yeScientology mu1990 nemukadzi wake wekutanga Mimi Rogers. Cruise kubvira ipapo yakaramba iri nhengo yakasimba yechechi uye yanga ichitaura kusimudzira pfungwa dzayo.
Cruise aigara achizivikanwa nekudhakwa kwake paruzhinji asati asarudza kurega kunwa. Iye zvino akadzikama, anotonhorera, akaunganidzwa uye zvakare akarega kuputa.
Iye mutambi akakura pane mhuka dzinovarairwa kunyanya imbwa uye iye kwemakumi emakore akaonekwa achitora mafoto ane akasiyana marudzi embwa. Zvipfuyo izvi zviri pedyo naye, zvinova izvo zvinovapa mukurumbira mafoto nemafirimu emuchadenga.
Unoziva here kuti Tom Cruise ane urefu hwe1.7m haana kukura pamatatoo? Iyo yega nguva yaakaonekwa aine akanaka maatatoo - ayo akafumurwa kuve ekunyepedzera - yaive apo iye aisimudzira firimu rake idzva Rock of Ages (2012).
Thanks for reading vedu Tom rwendo Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!